Midira amin'ny eCommerce miaraka amin'ny trano fisakafoanana | Martech Zone
Midira amin'ny eCommerce miaraka amin'ny trano fisakafoanana
Zoma, Aogositra 10, 2007 Alarobia, Novambra 30, 2011 Douglas Karr
Ity herinandro ity no herinandro voalohany naha Talen'ny Teknolojia ho an'ny Patronpath. Orinasa teknolojia tanora, Patronpath dia efa nisy fiatraikany lehibe tamin'ny indostrian'ny Online Ordering.
Tsy toy ny orinasa maro hafa, Patronpath dia nampifantoka ny rindrambaiko ho an'ny User Experience sy ny Integration. Raha tokony hamorona rindrambaiko ho an'ny mpividy izy ireo dia mifantoka amin'ny fampivoarana rindrambaiko ho an'ny mpampiasa.
Ny orinasa dia nanao asa tsy mampino na amin'ny fitomboana na amin'ny teknolojia satria tsy tena nanana mpampianatra teknolojia 'tompona' ilay fampiharana izy ireo. Niresaka tamin'ny tale jeneraly Mark Gallo aho androany ary tsy afaka nilaza ny zavatra nahavariana ahy.
Mailaka ny orinasa, manitsy haingana ny orinasany amin'ireo faritra ilain'ny Restaurateurs indrindra. Tsy mampino ny ekipa any. Ny fahalalan'izy ireo ny indostria no mahatonga ny zava-drehetra hiasa sy izay manangana orinasa lehibe.
Raha mijery ny indostrian'ny hotely fisakafoanana ianao dia mety hieritreritra fa voanjo aho hitsambikina amin'ity gig ity. Ny antsasaky ny trano fisakafoanana rehetra dia tsy mahomby ary ny tombony azo amin'ny salan'isa tsy mitambatra dia lozabe ny trano fisakafoanana ao an-trano. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny trano fisakafoanana mahomby sy ny trano fisakafoanana tsy mahomby dia mety ho manify toy ny volo… eo no nidiran'ny Patronpath.
Ity no antony mahatonga ny Ordonnance Online manao ny tsy fitovizany:
Manafatra sakafo bebe kokoa ny olona rehefa manafatra ny fizahana sy ny fanaterana izy ireo. Eritrereto izany… rehefa mitondra ny fianakavianao any amin'ny trano fisakafoanana ianao dia manafatra pizza amin'ny latabatra. Rehefa manafatra fanaterana ianao dia manafatra ampy ho an'ny sakafo maraina na sakafo hariva hariva koa!
Ny olona mitady bebe kokoa mora kokoa. Mihidy ny fivarotana enta-mavesatra ary mihabe ny gadona fisakafoanana. Tsotra ny antony, te-handany fotoana misy kalitao bebe kokoa izahay mianakavy, noho ny fomba fiainana be atao ary tsy dia miantsena sy mahandro firy. Raha afaka mahazo sakafo matsiro ho an'ny ankohonanao ianao ary manangona azy eny am-pody, maninona raha tsy !? Haingana ny fihinanana… fa ny famakiana sakafo misimisy ao an-tranonao ihany dia ahafahan'ny fianakaviana mivory manodidina ny latabatra.
Ny rafitra famandrihana an-tserasera lehibe dia mampihena ny lesoka amin'ny famandrihana ary tsy mandray loharanom-pahalalana ho an'ny mpiasa koa! Sarotra ihany ny manelingelina baiko rehefa ianao no manambatra azy, sa tsy izany?
Mbola betsaka anefa ny asa tokony hatao. The pos ny rafitra dia mbola antitra ihany. Mandehana mankao amin'ny trano fisakafoanana antonony dia hahita POS matanjaka mihazakazaka ao amin'ny Windows 95 ianao ary miasa avy ao amin'ny database Access! Azo antoka fa misy efijery fikitika mahafinaritra… fa ny indostria masaka ho an'ny mpilalao matotra hiditra sy hanadio trano.
Ny rafitra famandrihana an-tserasera no mahavita ny mahasamihafa azy. mampiasa APIs miaraka amin'ny POS, Fax, ary ny fampidirana mailaka - malalaka ny restaurateurs hanao izay tsara indrindra vitany… mivarotra sakafo sy serivisy be dia be, nefa manampy baiko mihabe sy lehibe kokoa! Teo no nidiranay. Manana fampiharana tsara izay mila hitanay hinoanao izahay. Ny orinasa sy ny indostria dia masaka ho an'ny fandraisana ary ho tonga ny tsara indrindra isika!
Eto Indianapolis, ampiasainay ny rindrambaiko ataonay Trano fanaovan-tsakafo any Scotty.
Mandehana any amin'i Scotty rehetra ary ho hitanao avy hatrany fa ny traikefa dia momba ny mpampiasa sy ny fampifangaroana izany amin'ny teknolojia. Ho anao mpankafy Colts, ny seza rehetra any Scotty dia seza eo anoloana satria ny televiziona tsirairay dia misy fahitalavitra LCD azy manokana! Aza hadino ny mijery azy ireo hisakafo atoandro ihany koa… manana menio $ 5 mahafinaritra ry zareo!
Aza hadino ny milaza aminy fa avy any Doug Patronpath naniraka anao!
Tantara momba ny solosaina barebones bare ho anao…
22 Aogositra 2007 amin'ny 10:33 PM
Efa nanao setup google apps vitsivitsy aho fa ny mailaka ihany.
Toa milamina io pejy fanombohana nataonao io.
Tsy maintsy manandrana an'izany aho
May 28, 2012 ao amin'ny 4: 23 PM
Nahita vahaolana vaovao aho, izay antsoina hoe Eat Online izay toa izany
na dia haingana kokoa sy eaiser aza noho ny hafa, efa hitanao ve?